Madaxweyne faroolle oo magacaabey gudi loogu yeerey gudiga xalinta khilaafaadka. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Madaxweyne faroolle oo magacaabey gudi loogu yeerey gudiga xalinta khilaafaadka.
Madaxweynaha maamulka puntland ayaa magacaabey gudi uu ugu yeerey gudiga xalinta khilaafaadka,iyadoo leysu diyaarinayo in puntland yeelato m/weyne musharaxiin badanina ay diyaar u yihiin in ay xilkaas qabtaan.
Dhanka kale musharaxiin kasoo horjeeda faroole ayaa qaadacey gudiga uu faroole ku dhawaaqey,waxeyna shir jaraa’id oo ay maanta qabteen ku sheegeen in iyaguna ay gudi kaas lamid ah ku dhawaaqayaan,kaas oo ay sidey sheegeen kala tashan doonaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka iyo m/weyne faroole laftiisa.
Arintan ayaa u muuqata in is qab qabsi hor leh uu puntland ka bilawdey hada,sidaas darteedna ay imaan karaan shaqaaqooyin marka doorashada la guda galo,waana doorashadii labaad iyadoo tii dawladaha hoose lagu fashilmey lana hakiyey,waxeyna kusoo beegmeysaa xili r/wasaarihii hore ee dawladii kmg C/weli Cali Gaas uu hada kamid yahey musharaxiinta xilka puntland dooneysa.
Previous articleXarakada dagaalyahanada Al-shabaab oo sheegey in ay saacado la wareegeen deegaano duleedka baydhabo ku yaal.
Next articleQaraxyo is xig xigga oo galabta ka dhacey magaalada ceelwaaq ee soomaaliya.